Uwe mmiri Ski na Snowboard ULLER - THE INDIAN FACE
SKI NA SNOWBOARD ML FREERIDERS
Igwe eji skiiki na sịkị anyị kere na maka freeriders. Ngosiputa ihe omuma nke di elu iji gosi nkwa nke kachasi nma na ntukwasi obi kachasi nma na onodu ndi kachasi nma n'oge omume Freeride. A na-emepụta ski masks anyị site na mkpa ndị otu anyị freeriders chọrọ ngwaahịa na usoro nke ma ihe nkasi obi. Ozugbo enyocha ngwaahịa ndị ahụ, anyị na-anakọta ozi niile dị mkpa iji nwee ike ịme nrụpụta dị mkpa na ụlọ ọrụ ahụ iji mezuo ihe ndị a chọrọ. Ha bụ ngwaahịa kachasị mma nke ọkwa kachasị elu
Helix & Freeride V.2 ::: Mgbakwunye Anya Igwe Mgbanwe
Usoro anyị nke Helix na Freeride V.2 bụ goggles sịnịma dị elu nwere Miri anya ndọtị na-agbanwe agbanwe Site na lenti abụọ gụnyere: 2 maka ụbọchị anwụ na CAT.1 yana ọkụ ọkụ maka ụbọchị visibiliti dị ala na CAT.3. Lensidi ya na-eme ka ị nwee ike mgbanwe na ngwa ngwa na-erughị 1 sekọnd.
Freeride V2 Black / Blue 225.00 €
Freeride V2 Black / Green 225.00 €
Freeride V2 Black / Red 225.00 €
Avalanche Nwa / odo
Avalanche Nwa / odo 185.00 €
Avalanche Agba / Oji
Avalanche Agba / Oji 225.00 €
Avalanche Oroma / ojii
Avalanche Oroma / ojii 185.00 €
Avalanche Oroma / acha anụnụ anụnụ 185.00 €
Avalanche White / udara 185.00 €
Vertical Nwa / acha anụnụ anụnụ
Vertical Nwa / acha anụnụ anụnụ 185.00 €
Vertical Nwa / udara
Vertical Nwa / udara 84.95 € 185.00 €
Vertical Nwa / odo
Vertical Nwa / odo 185.00 €
Vertical Mint / isi awọ
Vertical Mint / isi awọ 185.00 €
Vertical Uhie / acha
Vertical Uhie / acha 185.00 €
Cliff Nwa / udara
Cliff Nwa / udara 120.00 €
Cliff Ọcha / Uhie
Cliff Ọcha / Uhie 120.00 €
Cliff Uhie / odo
Cliff Uhie / odo 64.95 € 120.00 €
Cliff Ọcha / acha anụnụ anụnụ
Cliff Ọcha / acha anụnụ anụnụ 120.00 €
Nnukwu Ọsọ White Storm 120.00 €
Oké Ifufe Black / udara 120.00 €
Oké Ifufe Black / Green 120.00 €
Oke ojii / isi awọ 120.00 €
Oké Ifufe Blue / odo 120.00 €
Oke mmiri ozuzo uhie / acha anụnụ anụnụ 120.00 €
Oké Ifufe White / Blue 120.00 €
UllerỌ bụ ụdị akara ngosi dị elu nke ndị egwuregwu mepere emepe mebere. A na - ekepụta ngwaahịa anyị niile n'okpuru ahụmịhe nke ndị na - eme egwuregwu dị elu bụ ndị na - eleba mkpa ha na ngwaahịa anyị anya, na - etolite ihe ndị a iji kpuchie ihe niile chọrọ. A na-anwale ngwaahịa ndị ahụ na-ewere ha ruo n'ogo nrụgide kachasị elu iji hụ na ha ga-ezute atụmanya n'oge eji ọrụ ọkachamara na egwuregwu amateur.